Jamaica Tourism Sector iri Kutyaira Yakasimba Zvehupfumi Kudzoreredza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Tourism Sector iri Kutyaira Yakasimba Zvehupfumi Kudzoreredza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jamaica Yekushanya Svondo Yevhiki
Mumashoko akaitwa sechikamu cheJamaica's Yevhiki Yekuzivisa Kwevashanyi, Nyamavhuvhu 26 kusvika Gumiguru 2, Gurukota Rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, ari kukurudzira vagari vese kuti vabaiwe jekiseni re COVID-19 kuitira kuchengetedza hupenyu nekuenderera mberi nekufambisa hupfumi hwechitsuwa ichi.
Gurukota rezveKushanya rinokurudzira vagari kuti vabaiwe majekiseni apo chitsuwa ichi chinopemberera Svondo Yekuzivisa nezveVashanyi.
Tichitarisa kupora kwese, kuvepo kwekushanya semutyairi wekudzoreredza kwave kuoneka mukati menyika.
Hutano uye kuchengetedzeka kwevashanyi vese uye veko zvinoramba zviri pamberi peJamaica.
“Tichipemberera Svondo rekuzivisa nezvekushanyirwa pasi pedingindira rinoti 'Tourism for Inclusive kukura, 'ngatiisei nhomba mumusanganiswa, nekuti ndizvo zvichaita kuti kupora kwedu kuve kwakakwana asi zvakakosha kuponesa hupenyu, "vakadaro Gurukota Bartlett. “Tichitarisa matarisiro atakaita zvizere, kuvepo kwekushanya semutyairi wekupora uku kwave pachena. "Isu tave kugadzira gore kusvika parizvino US $ 1.2 bhiriyoni muhupfumi uye taunza vaenzi vanopfuura miriyoni munyika."
Gurukota Bartlett vakaenderera mberi vachiti, “Takabata nedenda iri nemuenzaniso wakanaka uye pasi rose racherekedza nzira iyo zviga zveJamaica zvakaitwa nenzira kwayo uye zvakanaka nevatambi vari mumaindasitiri nenyika yose. Tinofanirwa kubata basa redu rehutariri kuti tirege kusiya munhu shure. ”
Hutano uye kuchengetedzeka kwevashanyi vese uye veko zvinoramba zviri pamberi peJamaica. Pakutanga kwemwedzi uno, chitsuwa chakaparura chirongwa chekudzivirira hutachiona hwechitsuwa chakapetwa pamwe nehurongwa hwekuzvidira hwekupora munzvimbo dzakakosha pasirese. Uku kutyaira ndiko kuwedzera kwechirongwa cheJAMAICA CARES chinokatyamadza, mhinduro yenyika yose kuCOVID-19 inosanganisira echitsuwa Resilient Corridors uye yakazara hutano nechengetedzo.
Jamaica's Resilient Corridors, iyo inovhara zvinopfuura 85 muzana yechigadzirwa chekushanyirwa kwechitsuwa ichi uye inosanganisira isingasviki muzana muzana yevagari, vakanyora huwandu hwehutachiona hweisingasviki muzana muzana pagore rapfuura. Izvi zvinoratidza zvakajeka kubudirira kwechirongwa, inova ndiyo yega yerudzi rwayo muCaribbean. Inopa nharaunda yakachengeteka kune vashanyi kuti vafarire chigadzirwa chekushanya apo vachibvisa kusangana chaiko neruzhinji rwevagari vemo.
Jamaica inoramba yakavhurika yekufamba uye inoramba ichitambira vashanyi zvakachengeteka. Zvirongwa zvehutano nekuchengeteka zvaive pakati pekutanga kupihwa World Travel & Tourism Council (WTTC) Kuzivikanwa kwekufamba kwakachengeteka kwakabvumidza nzvimbo kuti ivhurezve zvakachengeteka kufamba munaJune 2020. Chitsuwa ichi chakazivisa munguva pfupi yapfuura imwe ndege kubva kumakiyi makuru emisika uye makumi mapfumbamwe. muzana yezvirongwa zvekushanya zvakarongwa zvakasara munzira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezveJamaica, ndapota enda ku www.chakavak.iu.